ဇွန် ၂၀၁၄ | NAB သတင်းများ | 2018 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2018 » ဇွန်လ
လုပ်ငန်းမန်နေဂျာ - စတူဒီယို & Event Ops ရေးအဖွဲ့
ရာထူး: Operations Manager ကို - စတူဒီယို & Event Ops ရေးအဖွဲ့ကုမ္ပဏီ: မှတ်တိုင် Technologies က, Inc တည်နေရာ: Menlo Park, CA အမေရိကန်ကျနော်တို့ကတိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှု, စတူဒီယိုစစ်ဆင်ရေး, အသံ-အမြင်အာရုံအတွေ့အကြုံများ, အဖွဲ့ကစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူတစ် Operations Manager ကိုရှာကြသည် Facebook ကထောက်ပံ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွဲစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့က join ဖို့ executable program မှကတိကဝတ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်း quantifiable ခိုင်မာတဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်, ရပါလိမ့်မယ် ...
ရာထူး: System ကိုအင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ: တောက်ပတည်နေရာ: Plano TX အမေရိကန်တောက်ပအစုလိုက်အပြုံလိုက်အကူးအပြောင်းဘတ်စ်ကားနှင့်ရထားလမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ပိုမိုထက် 80 နှစ်ပေါင်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်အလင်းရောင်ထုတ်ကုန်များ၏ဒီဇိုင်းနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများတွင်ဦးဆောင်တီထွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကစနစ်အင်ဂျင်နီယာထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောင်းလဲနေသောအသင်းကိုတည်ဆောက်ရန်ဆက်လက်နေကြသည်။ အနှစ်ချုပ်: တောက်ပနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများကိုတစ်ဦးအတွေ့အကြုံရှိသည့်စနစ်အင်ဂျင်နီယာရှာကြံနေပါတယ် ...
ကြော်ငြာ Tech မှ & Operations အထူးကု
ရာထူး: ကြော်ငြာ Tech မှ & Operations အထူးကုကုမ္ပဏီ: Sinclair အသံလွှင့်အုပ်စုတည်နေရာ: ဆီယက်တဲလ် WA အမေရိကန် Sinclair ဒစ်ဂျစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်း join ဖို့ကြော်ငြာ Tech မှနှင့်စစ်ဆင်ရေးအထူးကုရှာဖွေနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းနှင့်စစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေမဟာဗျူဟာရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်အသစ်သောပစ္စည်းများ, ဆန်းသစ်နည်းပညာများနှင့်အတူဤတိုးတက်မှုနှုန်းကိုဆက်လက်နှင့်ငါတို့ဝင်ငွေစီးမျိုးစုံရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်မှာအခန်းကဏ္ဍသည် ...
Post ကိုထုတ်လုပ်မှုအင်ဂျင်နီယာ / စတူဒီယို Manager ကို
ရာထူး: Post ကိုထုတ်လုပ်မှုအင်ဂျင်နီယာ / စတူဒီယို Manager ကိုကုမ္ပဏီ: အဆင့်မြင့်စနစ်များ Group မှတည်နေရာ: Sunnyvale, CA အမေရိကန်အဆင့်မြင့်စနစ်များ Group မှ Sunnyvale တစ်ဦးကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံကိုမှာစစ်ဆင်ရေးနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးကူညီရန် Post ကိုထုတ်လုပ်မှုအင်ဂျင်နီယာ / စတူဒီယို Manager ကိုရှာကြံနေပါတယ်။ မူလတန်းတာဝန်များကိုပါဝင်သည်; ထုတ်လုပ်မှု, ထုတ်လုပ်ခြင်း, မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှု, ပစ္စည်းကိရိယာများစီမံခန့်ခွဲမှု, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို post ။ တာဝန်များ: Post ကိုထုတ်လုပ်မှု: တည်းဖြတ်, ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းအရောင် ...
အသံအင်ဂျင်နီယာ / Technician အ, ဝိဇ္ဇာရေးစင်တာ
ရာထူး: အသံအင်ဂျင်နီယာ / Technician အ, ဝိဇ္ဇာ Center ကကုမ္ပဏီ: နာဇရက်မြို့သားကောလိပ်တည်နေရာ: Rochester, NY အမေရိကန်အဆိုပါအသံအင်ဂျင်နီယာ / Technician အ၏အဓိကအခန်းကဏ္ဍထုတ်လုပ်မှုအသင်း၏အဓိကအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်ဝိဇ္ဇာ Complex ဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်ဖြစ်ရပ်များမှအသံထောက်ခံမှုပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီအနေအထား orchestral နှင့်မွဖျော်ဖြေပွဲ, Music နှင့်ပို့ချချက်များတိုက်ရိုက်အသံအားဖြည့်နှင့်အတူကြိုတင်အတွေ့အကြုံကိုလိုအပ်သည်။ အသုံးပြုမှုအတွက်အပြည့်အဝတတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ဖြစ်ရမည် ...
"သင်ကလျင်မြန်စွာထိုသို့ပြုမှအကောင်းဆုံး, ဘာလုပ်နေမသိရပါဘူးတဲ့အခါမှာ!" - Jase ရော်ဘင်ဆင်, "Duck မင်းဆက်" A & E ကို, အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စျေးကွက်ကလူခဲယဉ်းရှာနေ start သည့်အခါ Gurney Productions, 2012-17 ကုန်သွယ်ရေးပြပွဲများမှာ နှင့် publicists သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းပစ္စယအဘယ်သို့ရှိနေသည်ကိုကောင်းစွာမှာမိုးသည်းထန်စွာ။ ဤလူအတိတ်အဘို့ဖြစ်ရပြီဘယ်မှာစာနယ်ဇင်းလူများ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, စဉျးစားမိ ...
Ooyala Flex ကိုမီဒီယာပလက်ဖောင်း, Ooyala အဆိုပါ Ooyala Flex ကိုမီဒီယာပလက်ဖောင်း, တာဝန်များကိုအလိုအလျောက်တဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့် Configure လုပ်လို့ရတဲ့အကြောင်းအရာကွင်းဆက် optimization ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူ Turner အာရှပစိဖိတ်အကြောင်းအရာစုစည်း powering ဖြစ်ပါတယ် 85% အားဖြင့်အကြောင်းအရာထုတ်ယူခြင်းအချိန်လျှော့ချ, Turner Automate နှင့် orchestral Workflows ကူညီပေး Workflows ရိုးရှင်းစွာနှင့် Turner များအတွက်စျေးကွက်ဖို့အချိန်အထိအမြန်နှုန်း။ ပို. ပို. ရှုပ်ထွေးသောအကြောင်းအရာပုံစံများနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုနှင့်အတူ ...